Huawei akatamisa budiriro yeOpenEuler kusangano risingabatsiri Open Atom | Linux Addicts
Darkcrizt | 09/11/2021 23:00 | Yakagadziridzwa ku 12/11/2021 15:01 | Noticias, Free Software
Huawei ikambani iyo kwemakore akati wandei yakashanda pamwe chete nemapurojekiti akasiyana akavhurwa sosi uye yave mureza mumunda uye ikozvino kambani. atora danho guru uye pamusoro pezvose mupiro mukuru wekuvhura sosi, kubva munguva pfupi yapfuura (pa2021 OS Indasitiri Summit muBeijing) yakaburitsa izvozvo Ndakaita danho rekuendesa kusimudzira kweOpenEuler Linux kugovera kune Open Atom Open Source Foundation.
Kune vasina ruzivo nezvesangano iri, vanofanira kuziva kuti ndiro boka risina purofiti rakafanana ne masangano enyika Linux Foundation uye Apache Software Foundation, asi tichifunga nezvezvakasiyana zveChina uye yakanangana nekuronga basa rekubatana muChinese open source mapurojekiti.
Vhura Atomu ichaita senge isina kwayakarerekera papuratifomu yekuwedzera budiriro yeOpenEuler, isina kusungirirwa kukambani chaiyo yekutengesa, uye achatongawo zvinhu zvenjere yakabatana neprojekti. China Telecom, imwe yevatambi vakuru vezvekufonera muChina, yakazivisa kushandiswa kweOpenEuler muzvivakwa zvayo uye yakaratidza yayo edition yekugovera uku, yakatangwa pasi pezita rekuti CtyunOS.
Mushure mekunge Deng Taihua, Mutevedzeri weMutungamiriri uye Mutungamiriri weHuawei Computer Chigadzirwa Line, avimbisa mupiro waEuler muhurukuro yekuvhura musangano, Huawei acharamba achidyara nekusimudzira budiriro yaEuler kubva pazvinhu zvishanu: hunyanzvi hwekuita tekinoroji, chivakwa chakasvibirira, kusimudzira kutengeserana, sosi yakavhurika. kuvaka nekusimudzira tarenda.
Zviri mukati meiyi Euler mupiro zvinonzwisiswa kuti zvinosanganisira: kodhi uye software mapakeji: mamirioni emitsara yecopyright uye yehungwaru marezinesi eHuawei self-developed code, anopfuura 8.000 software mapakeji akasimbiswa neHuawei nenharaunda; mapurojekiti ekuvandudza: Huawei's iSula, A-Tune, Stratovirt uye secGear mapurojekiti matsva; Trademarks: openEuler uye makumi matatu eChinese neChirungu zviratidzo kubva kuSula, A-Tune, Stratovirt uye secGear mapurojekiti; Mazita eDomain: openeuler.org nema subdomains ayo, uye openeuler.io nema subdomains ayo, anokwana mana; nharaunda dzenharaunda: kuvakwa kwebvunzo uye sevhisi sisitimu, kodhi yekutambira, nharaunda yekushanda chikuva uye zvimwe zvivakwa zvenharaunda.
Kugovera openEuler inovaka pane zviri kuitika mune yekutengeserana chigadzirwa EulerOS, yakagadzirwa se forogo ye hwaro hwepakeji CentOS, yakagadzirirwa kushandiswa pamaseva ane ARM64 processors uye ndiyo yega Linux yekugovera yakasimbiswa neOpengroup komiti yekutevedzera iyo UNIX 03 standard (macOS, Solaris, HP-UX uye IBM AIX). Misiyano pakati peOpenEuler neCentOS yakakosha uye haina kugumira pakugadzirisa zvakare. EulerOS ndeimwe yeashanu anoshanda masisitimu (EulerOS, macOS, Solaris, HP-UX, uye IBM AIX) uye iyo yega Linux yekugovera yakasimbiswa neOpengroup komiti kutevedzera iyo UNIX 03 standard.
Nzira dzekuchengetedza dzinoshandiswa mukugovera kweEulerOS dzakasimbiswa neBazi rePublic Security yePeople's Republic of China uye dzinozivikanwawo sekuzadzisa zvinodiwa neCC EAL4 + (Germany), NIST CAVP (US), uye CC EAL2 + (USA. )
Somuenzaniso, openEuler inosanganisira imwe Linux kernel, itsva GNOME-based desktop, inosanganisira ARM64-chaiyo uye yakawanda-musimboti optimizations, iSulad lightweight mudziyo system, clibcni network configurator, uye A-Tune auto-tuning system.
Huawei akapawo OpenHarmony chirongwa kuAtom Open, iyo inovandudza sisitimu yekushandisa yemidziyo yeIoT semawachi akangwara anoenderana neyavo LiteOS microkernel, mukuwedzera kune izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kutevera maitiro aya zvakare. Alibaba akapa zvakare AliOS Zvinhu zvinoshanda sisitimu kune yakaderera memory IoT zvishandiso kuvhura Atom uye Tencent atama iyo inoshanda sisitimu panguva chaiyo TencentOS Tiny (RTOS) kuvhura Atomu.
Mapurojekiti akagadzirwa nesangano reOpen Atom anosanganisirawo yakagoverwa DBMS ZNBase (inotsigira iyo PostgreSQL protocol), iyo Pika hombe yekuchengetera data system (interface level inoenderana neRedis) uye XuperCore blockchain chikuva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Huawei akatamisa budiriro yeOpenEuler kune iyo isiri-purofiti sangano Open Atom